Madaxweyne Gaas oo la kulmay Wasiirka Arrimaha dibada Talyaaniga | SAHAN ONLINE
Madaxweyne Gaas oo la kulmay Wasiirka Arrimaha dibada Talyaaniga
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ka qayb galay shirkii looga hadlayey arrimaha federaalka soomaaliya oo maalmihii ugu dambeyey kasoconayey Magaalada Rome ee Caasimadda Waddanka Talyaaniga ayaa kulan gaar ah laqaatay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalemiga ah ee dawladda Talyaaniga Mr. Lapo Pistelli.
Kulan kan ay wada yeesheen Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalemiga ah ee dawladda Talyaaniga Mr. Deputy Minister Lapo Pistelli ayaa waxa ay uga wada hadleen arrimo muhim u ah labada dhinacba oo ay kamid tahay ishkaashiga dhanka ammaanka , la dagaallanka kooxda alqaacidada alshabaab iyo horu-marinta kaabayaasha dhaqaalaha ee Puntland.
Madaxweynaha dawladda Puntland ayaa uga mahad celiyey dawladda talyaaniga sida ay u adkayso xidhiidhka saaxiibtimo ee soo jireenka ah ee ka dhexeeya dalka Talyaaniga iyo guud ahaan dalka Soomaaliya gaar ahaana Puntland iyo mashaariicda horu-marineed ee dawladda Talyaanigu ka fuliso Puntland isagoona ka codsaday inay sii laba jibbaaran mashaariicdaasi.
Geesta kale wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalemiga ah ee dawladda Talyaaniga Mr. Lapo Pistelli ayaa ku ammaanay dawladda Puntland horu-marka ay samaysay iyo dedaalkeedaba isagoona ballan qaaday inay sii wadayaan mashaariicdaasi horu-marineed ee dawladda talyaanigu ay ka fuliso Puntland .
Dawladda Talyaaniga ayaa horay Puntland uga fulisey mashaariic dhowra oo horu-marineed kuwaas oo ay kamid yihiin Garoonka diyaaradaha ee Magaalada Boosaaso oo shaqadiisii socoto loona diyaarinayo hab caalemi ah iyo Telefishinka iyo Idaacadda Puntland.